ဘာကြောင့် နားထောင်ပေးဖို့ လိုအပ်တာလဲ – Live the Dream
ဘာကြောင့် နားထောင်ပေးဖို့ လိုအပ်တာလဲ
ကျွန်တော် ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်တယ်။ တစ်ခါက သက်လတ်ပိုင်း လင်မယား စုံတွဲ တစ်တွဲမှာ သားသမီး ၃ယောက် ရှိပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ အငယ်ဆုံး သားလေးက သူ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ မွေးနေ့ ပွဲ ကို သွားဖို့ အတွက် မိခင်ဖြစ်သူ က လိုက်ပို့ ပေးရင်း နဲ့ မွေးနေ့ ပွဲပြီးတဲ့ ထိ စောင့်ပြီး သူ့ ရဲ့ သားငယ်လေး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆော့ ကစားနေတာကို လိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ သူ့ရဲ့ သားလေးဟာ အိမ်မှာမြင်နေကျ လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ ကလေး တစ်ယောက် အဖြစ်ကနေ သူငယ်ချင်းတွေအပေါ် အနိုင်ယူပြီး အပေါ်စီးက ဆက်ဆံနေတဲ့ ကလေး တစ်ယောက် အဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားတာကို တွေ့ မြင်လိုက်ရပါတယ်။ သားငယ်လေးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအပေါ် အထက်စီးက ဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံ ကို သဘောမကျတဲ့ အမေဖြစ်သူဟာ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အခါမှာ သားလေး အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အဲလို ဆက်ဆံရခြင်း အကြောင်းရင်းကို မေးကြည့်တဲ့ အခါ သားငယ်လေးရဲ့ အဖြေကတော့ သူငယ်ချင်းတွေက သူပြောတဲ့ စကားကို နားထောင်ကြောင်း၊ အိမ်မှာ ဆိုရင် အဖေ အမေ တွေအပြင် အကို အမ တွေကလည်း သူပြောတာကို ဘယ်တော့မှ နားမထောင်ပေးကြောင်း၊ သူပြောတာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် ကိုပဲ အမြဲ ပြန်ပြောခံ ရကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ နားထောင်ပေးခြင်း မခံလာရတဲ့ ၅နှစ် အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်စကားကို အလေးထားနားထောင်ပေး ခြင်းခံရတဲ့ ကျေနပ်မှု အပေါ် သာယာသွားပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ဘဲ သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ် အထက်စီးက ဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်လာကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူဟာ နားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီ ဖြစ်ရပ်ကို မြင်တွေ့ လိုက်ရတဲ့နောက် နားထောင်ပေးခြင်း အနုပညာရဲ့ အကြောင်းကို ပြန်ဆင်ခြင်မိသွား စေခဲ့တယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်လေးဟာ တစ်ကယ်တော့ သဘာ၀ ကျပါတယ်။ လူအများစု ဟာ စကား တွေကို နားထောင်ကြည့်ဖို့ ထက် စာရင် စကားပြောဖို့ ကို ပိုပြီး စိတ်အားထက်သန် တတ်ကြတယ်။ လူတွေရဲ့ သဘာဝမှာကို က မိမိကိုယ်ကို ဗဟိုပြုတတ်တဲ့ ဗီဇ ပါတာကြောင့် ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ့် ကိစ္စ ကိုယ့်အရေး ကိုယ့်အတွေး ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်ပြသနာ စတဲ့ ကိုယ်နဲ့ စပ်ဆိုင်တာတွေကိုပဲ ပြောနေမိပြီးတော့ တခြားသူတွေကို နားထောင်ပေးဖို့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နားထောင်ပေးတတ်ဖို့ က ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ ထိ အရေးပါတာလဲ လူတစ်ယောက်ကို နားထောင်ပေးခြင်းဟာ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူး တွေ ရနိုင်သလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေး ကြည့်ရအောင်နော်။
၁. လူမှုဆက်ဆံရေး ခိုင်မာဖို့
ဒါကတော့ လူတိုင်းလည်း နားလည်ထားပြီးသား ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ နားထောင်ခြင်း စွမ်းရည်တစ်ရပ်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ communication တစ်ခု ကျန်းမာတဲ့ relationship တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်ပဲ မဟုတ်လား။ ချစ်သူ ရည်းစား ကြား မိဘနဲ့ သားသမီး ကြား သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အချင်းချင်း ကြား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်းကြား ဘယ်လို relationship ကြားမှာ ဖြစ်စေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြား နားထောင်ပေးတတ်မှသာ ရေရှည်ခိုင်မြဲ နေမှာပါ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး လူချစ် လူခင်များတဲ့ သူတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ တူညီတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုကတော့ လူတစ်ဖက်သားကို တလေးတစား နဲ့ နားထောင်ပေးတတ်တာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ခုခုရင်ဖွင့် ချင်တာများရှိရင် ကိုယ်ပြောသမျှ ကို နားထောင်ပေးလေ့ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ သတိရတတ်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။
လောကမှာ အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးဖြစ်လာတာ လို့ အဆိုရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ က ကိုယ်တိုင်တောင်မသိလိုက်ဘဲ လူတစ်ယောက်ကို သူ့ ရဲ့ အပြုအမူ တစ်ခုထဲ ကြည့်ပြီး အမြန်ဆုံး ဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ပြသနာ တစ်ခုရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို မရှာဖွေဘဲ အပြစ်တင်ဖို့ စောတတ်ကြတယ်။ အကြောင်းရင်း တရားကို ရှာဖွေနေမဲ့ အစား အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုး ကို အမြန် စီရင်ဆုံးဖြတ် လိုက်ကြတာလည်း မကြာခဏ ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် လူ တွေကိုပေါ့။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် အချင်းချင်း နားထောင်ပေးလိုက်ခြင်းဟာ ပိုလည်း ရင်းနှီးသွားစေသလို တစ်ယောက် အကြောင်း တစ်ယောက် ပို နားလည်သွားစေပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းလည်း စာတတ်လာမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်တယ်။ဘယ်လို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး မျိုုး မှာမဆို နားထောင်ပေးတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် ရှိခြင်းဟာ ပိုပြီး ရင်းနှီးနွေးထွေး သွားစေတယ် ဆိုတာကတော့ ငြင်းစရာ မရှိပါဘူး။
၃. သင်ယူစရာတွေ ရှိတယ်
လူတော်တော်များများက ကိုယ်တိုင်လည်း သူများကို နားမထောင်ပေးခဲ့ မိသလိုပဲ ကိုယ့်ကိုလည်း နားမထောင်ပဲ ငြင်းပယ်ခံရတာမျိုးလည်း ကြုံဖူးကြမှာပါ။ မိသားစု မှာဖြစ်စေ တချိူ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ ဖြစ်စေ အသက်ပိုကြီး ဝါပိုကြီးတဲ့ သူတွေထက် အငယ်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ သူတွေက နားထောင်ပေးဖို့ ကို ပိုပြီး အငြင်းခံရလေ့ရှိတတ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလည်း မောင်နှမထဲမှာ အငယ်ဆုံး ဖြစ်တော့ တစ်ခုခုဆိုရင် နင်က အငယ်ပဲ ဘာမှမသိဘူး ဆိုပြီး ကြိုအပိတ်ခံရတာလည်း မနည်းဘူး။ တစ်ကယ်တော့ လူတိုင်းမှာ အတွေးကိုယ်စီ ရှိပါတယ်။ အသက်ကြီးသည်ဖြစ်စေ ငယ်သည်ဖြစ်စေ အသက်အရွယ်အလိုက် တွေ့ ကြုံ ရတဲ့ အတွေ့ အကြုံ တွေဆိုတာလည်း ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ထက် ၁၀နှစ်လောက်ငယ်တဲ့ ကလေးတွေ အမှတ်မထင်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေမှာလည်း သင်ယူစရာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖက်က အချိန်လေးနည်းနည်းပေးပြီး တဖက်လူကို နားထောင်ပေးရင် ကိုယ့်အတွက် သင်ယူစရာ တွေလည်း ရှိရင် ရှိနေမှာပေါ့။
တစ်ကယ်တော့ တစ်ဖက်လူကို နားထောင်ပေးခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အထူးတလည် အားစိုက်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူပေးနိုင်တဲ့ အကူအညီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့ ပြသနာတွေ ရင်ဖွင့်စကားတွေ အကြံဉာဏ်တွေ ကို နားထောင်ပေးခြင်းဟာ ပြောပြလိုက်ရတဲ့ သူအတွက်တော့ တစ်ကယ်ကို ဝန်ထုပ်ကြီး တစ်ခု ပေါ့သွားသလိုပါပဲ။ လူတိုင်းမှာ အခက်အခဲ ပြသနာတွေဆိုတာ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ က တစ်ဖက်လူကို ရင်ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ရဲ့ ပြသနာ တွေကို အဖြေရှာပေးဖို့ ဆိုတာထက် ဒီတိုင်းလေးပဲ နားထောင်ပေးဖို့ လိုချင်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း လူတွေကို ရင်ဖွင့် ပြောပြမိတာပေါ့။ ကိုယ်လည်း ရင်ဖွင့်ချင်သလို သူများတွေလည်း ပြောပြချင်မှာ ဖြစ်လို့ တစ်ဖက်လူကို အချိန်ပေးပြီး နားထောင်ပေးခြင်းနဲ့ ကူညီပေးကြရအောင်နော်။
လူမှု ဆက်ဆံရေး သဘာဝဟာ များသောအားဖြင့်တော့ အသွားအပြန် ရှိကြပါတယ်။ လူတွေဟာ တစ်ဖက်လူကို ကိုယ်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်း ပြန်ဆက်ဆံခံ ရတာများပါတယ်။ ဒီသဘောတရားက အမြဲတမ်းတော့ မှန်ချင်မှ မှန်ပေမဲ့ ယေဘုယျ အားဖြင့်တော့ ဒီသဘောပါပဲ။ သားသမီးတွေရဲ့ စကားကို နားမထောင်ပေး တတ်တဲ့ တချို့ မိဘ တွေရဲ့ သားသမီးတွေဟာလည်း မိဘတွေရဲ့ စကားကို ပြန်နားမထောင် ဘဲ နေတတ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း များပါတယ်။ ထိုနည်းတူပဲ အထက်လူကြီးရဲ့ နားထောင်ပေးခြင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်း မခံရတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ဟာ လည်း ကိုယ့်ရဲ့ အထက်လူကြီးကို လေးစားချင်စိတ် လျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို ဆက်ဆံရေး မျိုးမှာမဆို နားထောင်ခြင်း အနုပညာ ဆိုတာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ။ ကိုယ်လည်း တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာ ပြောပြချင်တာတွေ ရှိနိုင်တယ်။ အဲဒီအခါကျ ကိုယ်နားထောင်ပေးခဲ့ ဖူးတဲ့ သူတွေက ကိုယ့်ကို သတိတရ အလေးပေး နားထောင်ပေးကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီလို နဲ့ ပဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ဖေးမရင်း နေပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။